Draw Cartoons20.9.30 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.9.30 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ႐ုပ္ျပမ်ား Draw Cartoons 2
Draw Cartoons2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အနုပညာကတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျောပွပါဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုရှာဖွေပါ။ ကာတွန်းထုတ်လုပ်၏ရှုပ်ထွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပဲတစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်လာသည်။ ဒီ app ထုတ်ဝေဖို့ဇာတ်ကောင်ဆွဲထဲကနေ, ကာတွန်းအတွက်ကဏ်ဍ၏စောင့်ရှောက်မှုကြာပါသည်။
* ကီးဖရိန်များကချောမွေ့ animations တွေကိုတည်ဆောက်ခြင်း
ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပစ္စည်းများ * မြှုပ်ထားသောစာကြည့်တိုက်
* က Character လုပ်ငန်းခွင် (သင်ခြစ်ရာကနေပစ္စည်းဖန်တီးသို့မဟုတ်တင်းပလိတ်များ အသုံးပြု. နိုငျသညျ)
* Voice ကိုကာတွန်းကျော်သို့မဟုတ်ဂီတ add
* ပို့ကုန်နှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များကို (mp4, ပုံစံ) တို့ကိုဝေမျှခြင်း
အချို့အင်္ဂါရပ်များတွင်-app purchase ကတဆင့်သော့ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Draw Cartoons2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Draw Cartoons2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Draw Cartoons2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Draw Cartoons2အား အခ်က္ျပပါ
godgamesforever စတိုး31.33k
Draw Cartoons2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Draw Cartoons2အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.9.30
ထုတ်လုပ်သူ Zalivka Mobile Cartoons
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://docs.google.com/document/d/1mbVsod0gwqWF3v12EFeR3UQ00ZihuMCBiQ3uSa1mNdk/edit?usp=sharing
App Name: Draw Cartoons 2
Release date: 2019-08-03 20:27:58
Draw Cartoons2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ